China 700x25C Butyl ngerabha ibhayisekile Tyres engaphakathi Tube For Road Bike mveliso kunye nabenzi | Umgangatho
I-700x25C I-Butyl yeRubber yeBhayisikili yeTayara yangaphakathi iThubhu yebhayisikili yendlela
Umbhobho webhayisekile wenziwe ngebhotile yerabha ekumgangatho ophezulu. Inezinto ezifanelekileyo zokutywina, ukumelana ne-ozone, ukumelana nokuguga, ukufunxa ukothuka kunye nokugquma kombane.
Ukutshintsha ityhubhu yerabha yerabha kunokufunxa ifuthe lendlela yokungqubana, ikhululekile kwaye ikhuselekile. Ukufudumeza kunye nokunxiba okunganyangekiyo, okulungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Igama I-700x25C I-Butyl yeRubber yeBhayisikili yeTayara yangaphakathi iThubhu yebhayisikili yendlela
Ivaluva I-AV, i-FV, iDV, IV
Izinto eziphathekayo I-Butyl kunye nerabha yendalo
Iphakheji Ibhokisi yombala okanye ibhegi ephothiweyo
MOQ 3000PCS ngokobungakanani nganye
Iimveliso zethu zisiwe kumazwe angaphezu kwama-20 kwihlabathi liphela, kuthandwa ngabathengi basekhaya nabangaphandle. Ngapha koko, sidlulile kwi-ISO9001: imvume ye-2008 kwaye sineenkqubo zolawulo lwangoku kunye nezenzululwazi ezibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezinoxanduva. Yintoni esinokubonelela ngayo ityhubhu yangaphakathi yeNdlela yeBhayisikile, iFat Bike, iBMX, iMBB njalo njalo.
Factory Umzi-mveliso wethu
Qingdao Florescence Co., ltd na umenzi ityhubhu yobungcali ngaphakathi kunye namava imveliso iminyaka engama-26. Imveliso yethu ikakhulu ibandakanya ibutyl kunye nendalo yerabha engaphakathi ityhubhu yeMoto, iTrakhi, i-AGR, i-OTR, i-ATV, ibhayisekile, isithuthuthu, kunye ne-rubber flap, njl. Inkampani yinkampani enkulu eyenza uphando kunye nophuhliso olubanzi, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo.
1.Butyl yerabha ityhubhu ityhubhu
2.Ibhayisekile yebhayisekile ityhubhu yangaphakathi
Ityhubhu 3.Bhayisekile ngevili yebhayisikile
4.FV ibhayisekile ityhubhu yebhayisekile yendlela
5.Ibhayisekile yendalo yeTMB
Amavili amabhayisekile angama-6 kwibhayisekile yasentabeni
7.Ivili lebhayisekile yomsebenzi ityhubhu yangaphakathi
9.ityhubhu yangaphakathi ivili ibhayisekile
Amavili ityhubhu engaphakathi yamavili ebhayisekile
11.Butyl ityhubhu yangaphakathi ityhubhu yebhayisekile yendlela
Ubungakanani beetayiti zebhayisikili ezinobungakanani ngaphakathi
13.Ibhayisekile yebhayisekile yebhayisekile esezintabeni
14.Iivili zerabha yangaphakathi ityhubhu yebhayisekile
15.Ivili zebhayisekile ngaphakathi ityhubhu yebhayisekile
Amavili eebhayikhi ezi-16
17.Ibhayisekile yasentabeni idonsa iityhubhu zangaphakathi
18.Iibhubhu zebhayisekile zebutyl
Amavili ebhayisekile endalo 19 iityhubhu zangaphakathi
20.ityhubhu zangaphakathi zamatayala ebhayisekile
1.24 iiyure zokugcina ezinokungena, abasebenzi abaziingcali bajonga.
2.Printa uphawu olucelwe ngumthengi, kwaye isidingo sibonelela ngophawu lwentengiso lwamandla egqwetha.
I-3.Carton: ibhokisi yezothutho enobuchwephesha ukunqanda ingxaki yebhokisi emva kokufika kwizibuko, ekhokelela kwimirhumo ephezulu yemali engenayo.
4.Ukuthunyelwa: isikhongozeli esinye siya kusiwa kwiintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20 emva kokufunyanwa kwediphozithi.
Ixabiso elifanelekileyo, umgangatho ozinzileyo, iqela leenkonzo zobungcali, iminyaka engama-28 yefektri, iminyaka eli-15 yamava okuthumela ngaphandle.
Egqithileyo I-Butyl yeRubber yeSithuthuthu sangaphakathi seTyhuthuthu seThuthuthu ye-3.00-18
Okulandelayo: Ityhubhu yeButyl 1200-20
17 intshi Isithuthuthu Yangaphakathi Tube
Isithuthuthu Ibhotile engaphakathi
Isithuthuthu iTire yangaphakathi Tube
Isithuthuthu iTyhubhu yangaphakathi